သငျ့အိမျမှာ အညံ့တှကေငျးပွီး အေ ကာ ငျးတှေ ဝငျလာအောငျ ဒီလိုပစ်စ ညျးေ တှရှိနရေငျ အခုဘဲဖယျ ရှား လိုကျပါ – XB Media Myanmar
အညံ့တွေကင်းပြီး အကောင်းတွေ ဝင်လာအောင် သင့်အိမ်မှာ ဒီလိုပစ္စည်းတွေ ကိုဖယ် ရှားပါ
အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေတိုင်းမှာ စွမ်းအင်တစ်ခုစီရှိတယ်လို့ လူတစ်ချို့ကယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်မှာ တစ်ချို့အသုံးအဆောင်၊ ပရိဘောဂတွေကို မထားသင့်ပါဘူး။ အကြောင်း ကတော့ အဲ့ဒီ့ပစ္စည်းတွေကနေတစ်ဆင့် အညံ့တွေဝင်လာနိုင်လို့ပါ။ ဘာပစ္စည်းတွေ လည်းဆို တာကိုကြည့်ပြီးရင် သင့်အိမ်ကိုလည်း ရှင်းလင်းလိုက်ပါနော်။ ဒါဆိုရင်တော့ အညံ့ကင်းပြီး အေ ကာင်းတွေ ဝင်လာနိုင်ပါမယ်.
သင့်အိမ်ထဲမှာ သံချေးတက်နေတဲ့ ပစ္စည်းတွေ မထားသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ အဲ့ဒီ့ကနေတစ်ဆင့် မကောင်းဆိုးဝါးတွေ၊ အညံ့တွေ ဝင်လာနိုင်လို့ပါတဲ့။
တံမွကျစညျး၊ ဂေါျပွားစတဲ့ သနျ့ရှငျးရေးပစ်စညျးတှကေို တဈပတျ ဒါမှမဟုတျ တဈလတဈခါေ လာကျတော့ ဆေးကွောပေးသငျ့ပါတယျ။ နောကျပွီး တံမွကျစညျးကို အပေါျအောကျေ ဇာကျ ထိုးမထောငျဘဲ ပုံမှနျအတိုငျးထားရပါမယျ။
ညစ်ပတ်နေတဲ့ တံမြက်စည်းနဲ့၊ ဇောက်ထိုးထားထားတဲ့ တံမြက်စည်းတွေက အညံ့တွေကို ခေါ်ဆောင်တတ်တယ်လို့ အယူရှိကြလို့ပါ။
သေဆုံးပြီးသားသူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ချိတ်ဆွဲခြင်းဟာလည်း အညံ့တွေ ဝင်လာစေနိုင်တယ်လို့ တစ်ချို့က ယုံကြည်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် သေဆုံးပြီးသားသူတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံကို ချိတ်ဆွဲတာ ထက် အံဆွဲ၊ အယ်လ်ဘမ်ထဲမှာ ထည့်တာ ပိုပြီးကောင်းပါတယ်။
သင့်ရဲ့ အိပ်ရာဘေးတည့်တည့် အထူးသဖြင့် အိပ်နေစဉ် သင့်ကို သင်ပြန်မြင်နေရတဲ့ပုံစံမျိုးမှာ မှန်ကို မထားသင့်ပါဘူး။ အကြောင်းကတော့ သင့်ကို ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စေပြီး အားအင်တွေကို စုပ်ယူနိုင်လို့ပါတဲ့။
အိမ်ထဲမှာ ဆူးပါတဲ့အပင်တွေကို ထားခြင်းဖြင့် အညံ့တွေ ဝင်လာနိုင်တယ်လို့ အချို့ယူဆကြ ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆူးပါတဲ့အပင်တွေကို အဝင်ဝ ဒါမှမဟုတ် ခြံထဲမှာပဲ ထားသင့်ပါတ ယ်တဲ့ ။Em Em
အရာဝတျထုပဈစညြးတှတေိုငြးမှာ စှမးအြငတြဈခုစီရှိတယလြို့ လူတဈခွို့ကယုံကှညကြှပါတယြ။ ဒါကှောင့ြ အိမမြှာ တဈခွို့အသုံးအဆောငြ၊ ပရိဘောဂတှကေို မထားသင့ပြါဘူး။ အကှောငြး ကတော့ အဲ့ဒီ့ပဈစညြးတှကနေတဈေဆင့ြ အညံ့တှဝငေလြာနိုငလြို့ပါ။ ဘာပဈစညြးတှေ လညြးဆို တာကိုကှည့ပြှီးရငြ သင့အြိမကြိုလညြး ရှငြးလငြးလိုကပြါနောြ။ ဒါဆိုရငတြော့ အညံ့ကငးပြှီး အေ ကာငြးတှေ ဝငလြာနိုငပြါမယြ.
သင့အြိမထြဲမှာ သံခွေးတကနြတေဲ့ ပဈစညြးတှေ မထားသင့ပြါဘူး။ အကှောငြးကတော့ အဲ့ဒီ့ကနတဈေဆင့ြ မကောငးဆြိုးဝါးတှေ၊ အညံ့တှေ ဝငလြာနိုငလြို့ပါတဲ့။
တံမှကစြညြး၊ ဂေါပြှားစတဲ့ သန့ရြှငြးရေးပဈစညြးတှကေို တဈပတြ ဒါမှမဟုတြ တဈလတဈခါေ လာကတြော့ ဆေးကှောပေးသင့ပြါတယြ။ နောကပြှီး တံမှကစြညးကြို အပေါအြောကြေ ဇာကြ ထိုးမထောငဘြဲ ပုံမှနအြတိုငြးထားရပါမယြ။
သဆေုံးပှီးသားသူတှရေဲ့ ဓာတပြုံကို ခွိတဆြှဲခှငြးဟာလညြး အညံ့တှေ ဝငလြာစနေိုငတြယလြို့ တဈခွို့က ယုံကှညကြှပါတယြ။ ဒါကှောင့ြ သဆေုံးပှီးသားသူတှရေဲ့ ဓာတပြုံကို ခွိတဆြှဲတာ ထကြ အံဆှဲ၊ အယလြဘြမထြဲမှာ ထည့တြာ ပိုပှီးကောငးပြါတယြ။
သင့ရြဲ့ အိပရြာဘေးတည့တြည့ြ အထူးသဖှင့ြ အိပနြစဉြေ သင့ကြို သငပြှနမြှငနြရတေဲ့ပုံစံမွိုးမှာ မှနကြို မထားသင့ပြါဘူး။ အကှောငြးကတော့ သင့ကြို ပငပြနြးနှမးနြယစြပှေီး အားအငတြှကေို စုပယြူနိုငလြို့ပါတဲ့။
လူသားများမဖူးရတဲ့စေတီထူး ၃ ဆူဆိုတာရှိပါတယ်